The dhayamita pakati vharuvhu, mamirimita
Kureba pematanda, mamita
Price pa tani
Zvachose kurema chisimbiso, makirogiramu
Mari pa pub
kukarukureta pamusoro chisimbiso
Ngaaverenge nhamba kurema valves, ayo zvachose kukura, uremu mumwe mugwagwa uye tsvimbo imwe chisimbiso.
Kubva anozivikanwa dhayamita uye urefu chisimbiso.
Ngaaverenge nhamba urefu chisimbiso, ayo kukura uye uwandu chisimbiso mbariro, uremu mumwe mugwagwa uye tsvimbo imwe chete.
Kubva anozivikanwa dhayamita uye zvachose kurema vharuvhu.
Dzemaitirwe kunobva kurema imwe cubic mita simbi 7850 makirogiramu.
Kukarukureta pamusoro armature imba yokuvaka
Paivakwa imba kunokosha zvikuru zvakarurama kuverenga chitsama chisimbiso hwaro. Kuti vaite izvi zvichaita here kubatsira chirongwa chedu. Uchishandisa Calculator valves zvinogona, nokuziva uremu uye kureba shamhu kuziva zvachose uremu rwaunoda chisimbiso, kana nhamba inodiwa tsvimbo uye hwadzo kureba. date izvi kuchabatsira nokukurumidza uye nyore nyore kuverenga uwandu chisimbiso aifanira kuita basa rako.
Kukarukureta pamusoro Fittings nokuda-siyana nheyo
Kuverenga chisimbiso vanofanira kuziva mhando imba uye bhesimendi. Pano, pane dzinowanzotaurwa dzomutauro maviri. Izvi rakanyorwa zviuno nheyo.
Fittings nokuti rakanyorwa hwaro
Rakanyorwa hwaro rinoshandiswa apo ari nyandu nevhu kunodiwa kuisa rinorema kongiri kana imba nezvidhina makuru gobvu kongiri Slabs. Panyaya iyi nheyo kunoda chisimbiso. It akasikwa dzinodengenyeka maviri, rimwe nerimwe chine mbiri akaturikidzana petsvimbo perpendicular kune mumwe.
Chimbofunga kukarukureta kuna chisimbiso nokuda Slabs, kureba chikamu chiri 5 mamita. Unowedzera matanda anoiswa ari chinhambwe masendimita 20 kubva mumwe. Somugumisiro, kurutivi rumwe vachada mbariro 25. Panguva yehombodo ndiro mbariro havasi akaiswa, zvino, ndizvo 23.
Zvino, achiziva nhamba pematanda, urefu ravo zvinogona akaverenga. Zvinofanira kucherechedzwa kuti matanda valves havafaniri kusvika micheto masendimita 20, uye, naizvozvo, pahwaro kureba ndiro, kureba tsvimbo nomumwe achava 460 cm. Transverse layer akapa kuti ndiro rine mativi chimiro achava mumwe chete. Tinewo kuti ngaaverenge nhamba Fittings hunodiwa kuti batanidza vose dzinodengenyeka.
Zvokufungidzira kuti kure pakati mabhandi 23 cm. Panyaya iyi, mumwe jumper pakati pavo achava kureba masendimita 25, sezvo masendimita maviri kuenda kugomo Fittings. Matandira akadaro muna 23 pauwandu, sezvo ivo vakaitwa muchitokisi panguva mharadzano nechimwe chisimbiso mabhandi iyi. With date izvi, tinogona mberi kuti kuverenga achishandisa chirongwa.
Fittings nokuti kanyika hwaro
Strip hwaro rinoshandiswa apo vari kunyanya kugadzikana ivhu achipfeka tote House zvakaoma. Zviri nheyo tepi chakagadzirwa nekongiri kana zvakasimbisa kongiri kuti pakugadzwa kumativi mukomberedzo kweimba uye pasi huru akatakura mutoro-masvingo. Chisimbiso rokuvambwa anowanikwawo 2 dzinodengenyeka, asi nemhaka chaizvo pakati kanyika nheyo chisimbiso pamusoro payo unopedza shoma zvikuru uye, naizvozvo, iwo uchatungirazve mutengo shoma.
Mitemo chisimbiso marongerwo pamusoro zvakafanana rakanyorwa nheyo. Chete matanda vanofanira vanoguma muna 30-40 masendimita kubva pakona. Uye mumwe nomumwe jumper anofanira pa 2-4 masendimita kuti dzichitsigira kuti tsvimbo pamusoro payo nhema. Kukarukureta dzaibva kumusoro jumpers anoitwa musi ichocho sezvo ari kuverenga pamusoro yaidiwa chisimbiso urefu rakanyorwa nheyo.
Cherechedza kuti mune zvose rokutanga uye rechipiri kacho valves anofanira kubatwa ukomba hwakanga huchiipoteredza vanenge 2-5 muzana.